နှစ်နာရီပြည့်လို့ နို့တိုက်ရမယ့်အချိန် ကလေးအိပ်ပျော်နေရင် မတိုက်ဘဲထားသင့်သလား? – BurmeseHearts
နှစ်နာရီပြည့်လို့ နို့တိုက်ရမယ့်အချိန် ကလေးအိပ်ပျော်နေရင် မတိုက်ဘဲထားသင့်သလား?
နှစ်နာရီပြည့်လို့ နို့တိုက်ရမယ့်အချိန်မှာ ကလေးအိပ်ပျော်နေတဲ့တိုင်အောင် နှိုးပြီးတိုက်ရပါမယ်။ ကလေးရဲ့အစာအိမ်ဟာ နုနယ်သေးတော့ အစာမရှိဘဲ အထဲမှာ အစာချေဖျက်စနစ်က အလုပ်လုပ်နေရင် ကလေးရဲ့ နုနယ်တဲ့အစာအိမ်ကို ထိခိုက်မှာစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ လူအိပ်နေပေမယ့် ကိုယ်ထဲက အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေက သူ့ဟာသူ မနားတမ်း အနှေးနဲ့အမြန်ဆိုသလို အလုပ်လုပ်နေကြတာ မဟုတ်လား။ ကလေးရဲ့ အစာအိမ်က ကလေးအိပ်နေလို့ အလုပ်မလုပ်ဘဲ ငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေ။
ဘာကြောင့် မွေးကင်းစ ကလေးငယ်တွေကို နှစ်နာရီခြားတစ်ခါဆိုသလို နို့တိုက်ကျွေးရတာလဲ?
ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၃၆)ပတ်မှ (၃၉)ပတ်အတွင်း
BurmeseHearts	 Jul 7, 2015 0
ဘာကြောင့် မွေးကင်းစ ကလေးငယ်တွေကို နှစ်နာရီခြားတစ်ခါဆိုသလို…
မွေးကင်းစကလေးအတွက် အကောင်းဆုံး အစာအာဟာရဟာဘာလဲ?
ကလေးတွေ ပျော်ပျော်လေး သင်ယူစေချင်
ကလေးမီးဖွားဖို့ ဆေးရုံတက်မယ့်မိခင်ဟာ ဘာကြောင့် အစာတွေ မစားလာရသလဲ?
အာဟာရပြည့်ဝစွာမစားတဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေရဲ့ နို့ရည်ဟာ အာဟာရပြည့်ဝစွာ…
ဆေးလိပ် ၊ အရက်စွဲနေတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်နှင့် ဗိုက်ထဲက…
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အကောင်းဆုံးအာဟာရတွေဟာ ဘာတွေလဲ?
တပါးသူလက် အပ်ထားတဲ့ ကိုယ့်ရင်သွေး
ကလေးတွေ သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်နေတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
ကလေးမီးဖွားပြီးတဲ့တိုင်အောင် မီးနေသည်ဟာ ဘာကြောင့် ခါးနာ ၊ ဗိုက်နာ…
နို့တိုက်ပုံတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ နို့တိုက်ကျွေးပုံက…
ကလေးကို ပုံသွင်းမယ့် လူကြီး
ဘာကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန် မပြည့်တဲ့ကလေးတွေ မွေးဖွားမလာရသလဲ?
မွေးဖို့နီးလာတဲ့ ကိုယ်ဝန် ရက်သတ္တပတ် (၃၆)ပတ်မှ (၃၉)ပတ်အတွင်း…